PUG DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Pug Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Hector the Pug sugaya daaweyn.
Eyga Pug ee Shiinaha
Pug waa eey yar, oo xeel dheer, laba jibbaaran, eey adag. Madaxa wareega waa weyn yahay oo leh af gaaban, oo af xun, oo afar gees leh. Moles dhabannada ayaa loo tixgeliyaa baro qurux. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyo yar oo hoosta ka xariiqan. Indhaha aadka u waaweyn, ee caanka ah ayaa mugdi ah. Dhegaha yar yar ee dhuuban ama midab baa kacay ama badhan baa qaabeeya. Wejigu wuxuu leeyahay laalaab waaweyn oo qoto dheer. Dabada sare ee sare ayaa lagu duubay dhabarka gadaashiisa iyo labalaab labanlaab ayaa laga door bidaa giraanta bandhigga. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Koodhka gaaban waa jilicsan yahay, ganaax yahay oo siman yahay. Midabada koofiyaddu waxay ku yimaadaan abrikot, fawn, madow iyo qalin.
Pugga ayaa aad u xiiseynaya, oo leh dabeecad farxad leh-nasiib wanaag. Layaab leh, basbaas iyo xamaasad leh, waa mid daacad ah, kalgacayl iyo kalgacal leh qoyskiisa. Ciyaar, firfircoon oo ficil-celin ah, waa hubaal inuu kaa qosli doono. Caqli aad u sarreeya, way fududahay iyada oo aan kala duwanaansho ku jirin tababarkiisa. Eeyahaani way yara yara qasmi karaan haddii ay dareemaan inay yihiin ka maskax badan aadanaha hareerahooda. Khayayaashu waxay u nugul yihiin codka codkaaga, sidaas darteed ciqaab adag ayaa ah mid aan loo baahnayn. Waxay u baahan yihiin milkiile kaas oo ah deggan, haddana adag, kalsooni leh iyo waafaqsan shuruucda . Eygan maahan wax lagu farxo ama lagu caajiso. Iyagu waa ilaaliyeyaal wanaagsan, aad u daacad ah oo aan ahayn hageyaal. Dukaanleydu waxay si wanaagsan ula dhaqmaan eeyaha iyo xayawaanka kale, waxayna ula dhaqmaan si aan fiicnayn carruurta iyo martida labadaba. Hubso inaad noqotid hogaamiyahaaga Pug's pack. Khaanadaha aan lahayn hoggaamiyeyaal bani aadam oo xoog leh ayaa hinaasi kara, oo waxay bilaabi karaan inay muujiyaan dabeecado ilaalin ah, sida ilaalinta alaabta guriga , cuntada, alaabada lagu ciyaaro, ama baro kale oo guriga ku yaal. Dabeecadani waxay dhacdaa oo keliya marka eeyaha loo oggolaado inay la wareegaan. Dabeecadahaan waa la sixi karaa marka milkiilayaashu waxay bilaabayaan inay muujiyaan hoggaanka saxda ah . Eeyaha dareema inay u baahan yihiin inay guriga maamulaan kuma farxaan sida eeyaha garanaya inay yihiin kuwa raacsan aadanaha, maadaama ay aad u culeys badan tahay eeyga inuu u baahan yahay inuu dadka 'safkiisa' ku hayo.
Dhererka: Ragga 12 - 14 inji (30 - 36 cm) Dumarka 10 - 12 inji (25 - 30 cm)
Miisaanka: Ragga 13 - 20 rodol (6 - 9 kg) Dumarka 13 - 18 rodol (6 - 8 kg)
Dulucyadu waxay si fudud u qabtaan hargabka waxaana culeys ka qaba cimilada kulul iyo qabow. Waxay u nugul yihiin xasaasiyad iyo xuubka gaagaaban wuxuu gacan ka geystaa dhibaatooyinka neefsashada ee joogtada ah, taasoo ka dhigeysa inuu Pugga u muuqdo inuu hindhiso oo uu khuuro (Dulucyadu waxay la il daran yihiin hawo-mareenka oo liita.) U janjeera burooyinka unugyada . Ku-soo-gaadhista Pug Dog Encephalitis (PDE), oo ah caabuq maskaxda ku dhaca oo ku dhaca Dhalinta qaangaarka ah inta badan da'doodu u dhaxayso 2 iyo 3. Iyagu ma ahan kuwa cirfiidka ugu fudud. Biyo-xireennada sida caadiga ah waa inay lahaadaan qaybo qalliin sababtoo ah cabbirka madaxyada carruurta. Waxaa jira fursad ah Keratitis (caabuq ku dhaca kiliyaha) iyo boogo ku yaal kiliyaha. Indhaha ayaa u nugul oohinta iyo isha cherry . Ha ku dhaafin Pug, maxaa yeelay waxay cuni doonaan in ka badan inta iyaga ku wanaagsan, iyaga oo si dhakhso leh u cayillan oo ku noolaanaya nolol aad u gaaban.
Pugga wuxuu ku fiican yahay nolosha guryaha. Waa wax hawl yar gudaha gudihiisa waxayna sameyn doontaa hagaag la'aan deyr la'aan. Uma adkeysan karo cimilada kulul ama qabow waana in lagu hayaa guriga dhexdiisa heerkul raaxo leh.
Dulucyadu waa eeyo adag oo lugaha gaagaaban oo toosan. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta socdo . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta cirifka ama gadaasha qofka haya hogaanka, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasna wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Waxay ku raaxaystaan ​​ciyaaro firfircoon waxayna ku hayaan caafimaad wanaagsan haddii la siiyo jimicsi joogto ah. Laakiin ka taxaddar inaadan dhaafin, gaar ahaan haddii aad aragto iyaga oo bilaabay hindhiso.
Qiyaastii 12 ilaa 15 sano.
Qiyaastii 2 -6 eeyo
Jaakad jilicsan oo gaaban, ayaa si fudud loo hagaajin karaa. Ku caday oo ku shanlee burush adag oo shaambada leh markii loo baahdo oo keliya. Si fiican u qalaji qubayska ka dib si eey uusan u qaboojin. Dareeraha wajiga waa in si joogto ah loo nadiifiyaa. Noocani waa mid ka sarreeya celceliska daadinta.
Pug waa mid ka mid ah noocyadii ugu da'da weynaa ee maanta la yaqaan, lana rumeysan yahay inuu soo ifbaxay kahor 400 BC. Waxaa jira xoogaa dood ah oo ku saabsan asalka Pug. Cilmi-baarayaasha badankood waxay isku raaceen in Pug-gu asal ahaan ka soo jeedo Aasiya, kana soo farcamay gaagaaban Pekingese . Aragti kale ayaa ah in ay tahay natiijada ka gudubka yar Bulldog , halka qaar kalena ay mala awaalayaan inay tahay qaab yar oo ka mid ah Faransiiska Mastiff (Dogue de Bordeaux) . Farshaxanistaha Hogarth wuxuu lahaa Pug la yiraahdo 'Trump' oo uu badanaa ku sawiray shaqadiisa. Noocani wuxuu caan ku noqday xilliyadii Fiktooriya qarnigii 19aad. Kaniisadaha Tibet waxay Pugs ka dhigteen sidii xayawaan gurijoog ah. Noocani wuxuu u kicitimay Japan iyo Yurub, halkaas oo aysan u noqon oo kaliya xayawaanka boqortooyada laakiin eeyga rasmiga ah ee Guriga Orange ee Holland. Amiir William II wuxuu lahaa Pugs. Hal eey ayaa si gaar ah loo sheegay inuu naftiisa badbaadiyey 1572 markii uu ku sugnaa Hermingny, markii eeygu ciyey markii uu ku soo dhowaaday Isbaanishka isagoo uga digaya joogitaankooda. Faransiiska, Napoleon xaaskiisa Josephine waxay lahayd Pug la yiraahdo Fortune. Habeenkii arooskooda, markii Napoleon uu u oggolaaday eeyga inuu ku seexdo sariirtooda, Josephine waxay u sheegtay, 'Haddii Cayayaanka uusan ku seexan sariirtayada, anigana ma ihi!' Markii Josephine xabsiga loo diray waxay adeegsatay eyga yar si ay farriimo qarsoodi ah ugu dirto ninkeeda iyada oo warqad dhigaysa hoosta qoorteeda. 1860 markii Ingriisku la wareegay Qasriga Imperial Palace, waxay ogaadeen dhowr Pugs iyo Pekingese, eeyahana waxaa dib loogu soo celiyey England iyagoo wata. Xisbiga AKC wuxuu aqoonsaday Pug-ga sanadkii 1885. Qaar ka mid ah hibooyinka Pugga waxaa ka mid ah: ilaalin iyo sameynta tabo.
Roxy the Pug madow markuu jiray 7 sano
Max Pug markuu jiray 8 sano
Ku xumee Pugga markuu jiro 2 sano
'Kani waa sawirka afarteyda Dukaan. Dulucyadayda: Duffer (3), Zoe '(2), Abby (2) iyo Frankie (1) gabi ahaanba waxay jecel yihiin kamaradda. Waxay ii sawiri doonaan markasta oo aan doono. Duffer iyo Zoe ', labada gadaal, waa waalidkii Frankie ... Abby waa Pug madow. Waxay yihiin kuwo firfircoon, ciyaar badan oo aad u jecel. Duffer ayaa heesaya oo qoob-ka-ciyaaraya dhammaantoodna biyaha way jecel yihiin. '
'Tani waa gabadhayda macaan ee Shelby oo lagu muujiyey halkan 10 jir. Waxaan dhab ahaan dooranay Pug ka dib markii aan qaadannay Kediska Taranka eeyga ee websaydhkan 10 sano ka hor waxayna u noqotay wax la yaab leh qoyska. Waxaan u daayey sidii ey ey oo had iyo jeer waxay leedahay dabeecad jaceyl, jaceyl eeyo kale , bisadaha iyo dadka. Isla markii aan bilaabayey waxaan tababbaray iyada, halkii aan ku qaylin lahaa, waxaan doortay inaan isticmaalo dhalo biyo ah si aan u siiyo xoqin deg deg ah markii ay eey tahay oo qof walba qaniino (sida inbadan oo qurux badan, laakiin anigu ma rabin wax xumaan ah) caadooyinka sameysma!). Waxay taqaanaa sida loo fadhiisto, ruxruxo, sariirta loo tago waxayna ogtahay ereyo badan sida 'kaalay,' raac raacid / socod 'oo ay ugu jeceshahay:' daawee. ' Mid ka mid ah wax iga yaabiyey ayaa ahayd inta ay daadiso — waa sanadkii ’wareeg iyo joogto. Markii aan xaqiiqsaday, waxaan u tababaray inayna ku dul boodin alaabta guriga (dhalada biyaha ayaa si fiican u shaqaysay taas, sidoo kale!) Runtiina waan iska ilaalineynaa dharka sida dhogorta madow oo muujisa dhibic kasta oo dhogor cad ah oo aan xaddi cajalad duuban u muuqan inay meesha ka saareyso! ''
'Tani waa kacdoon lagu muujiyay halkan 1 sano jir. Wuu ka yara duwan yahay fawnka caadiga ah iyo Pugga madow maxaa yeelay wuxuu leeyahay qiiq sigaar ah dhabarka iyo caloosha. Isagu waa jilibkeyga diiran, laakiin ha u oggolaan in cabirku ku khiyaaneeyo, wuxuu la qabsan karaa eeyaha waaweyn (Waan koriyaa Dibi Dibi ) iyo inta badan isagu waa hogaamiyaha markay u timaado iyaga. Waxa uu helay uun 6-toddobaad 'walaashiis,' a Doxie loo yaqaan Maya, isna wuu ka ilaaliyaa iyada bisadaha . Aad baan u jeclahay isaga! Waxaan daawaday Eyga Xanaaqa ah waxaanan isticmaalay qaar ka mid ah tilmaamaha aan ka bartay Cesar markii aan tababaray ninkeyga yar si uu u noqdo nin wanaagsan. Waxaan qorsheynayaa inaan isticmaalo qaar ka mid ah tilmaamaha aan bartay si aan u tababaro Doxie Maya-na sidoo kale! '
Ka caroon cunugga yar ee madow ee loo yaqaan 'Pug puppy' oo jira 9 toddobaad
Dabada cirifka ah ee Pug
Suumanka Fugga madow
Buzo eey Pug ah oo ah 2 bilood jir
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Pug
Sawirada Pug 1
Sawirada Pug 2
Sawirada Pug 3
Sawirada Pug 4
Sawirada Pug 5
Sawirada Pug 6
Eeyaha Pug: Sawirada Guryaha ee La Uruurin Karo
shih mo eeyo yaryar oo iib ah
toy Cocker poodle isku darka spaniel
4 bilood jir bulldog american
jaallaha shaybaarka laysku daro